सरकारका कारण अवरोधमा परेको संसद - Harekpal
रामचन्द्र घिमिरे ६ माघ २०७६, सोमबार ११:५९ मा प्रकाशित
शनिवार-नेपाली कांग्रेसका नेता नरहरि आचार्यको निवासमा सरकारका कारण अवरोधमा परेको संसद बारेमा छलफल भएको छ । संसदको अवरोध प्रतिपक्षका कारणले विगतमा बेलाबेलामा हुन्थ्यो अहिले सत्ता पक्षका कारणले अबरुद्ध भएको छ । सरकारको अनिर्णयका कारणले प्रतिनिधिसभा बैठक सूचना टासेर अबरुद्ध छ । संसद भित्र सभामुखले बस्नुस् भन्ने र सांसदहरु उभिइरहेर पनि अबरुद्ध हुन्छ । एकपटक, दुईपटक, तिनपटक होइन बारम्बार सूचना टासेर यतिखेर अबरुद्ध भइराखेको छ । प्रतिपक्षले अबरुद्ध गर्दा सरकारले खुलाउने प्रयास गथ्र्यो तर अहिले सरकार आफै अबरोधको कारण बनेको छ यो अनौठो भएको छ ।
विधेयकहरु अलपत्र छन् सुरु भएदेखिनै प्रतिनिधिसभा बैठक हुन सकेको छैन । यो अधिवेशलाई विधेयक अधिवेशन भन्ने गरिन्छ । उपसभामुख भएकाले बैठक रोक्नु पर्ने थिएन । सभामुखका निम्ति सल्लाह गर्दै गएर उपसभामुखको अध्यक्षतामा बैठक चलाउन पनि सकिन्थ्यो तर सरकारको परामर्शमा संसद् सचिवालयले अवारेध गर्ने काम गर्यो । २०४८ सालमा सभामुख दमननाथ ढुङ्गानाले सरकार सत्तापक्षको संसद् प्रतिपक्षको भन्नु हुन्थ्यो । उहाँ सत्ता पक्षकै मानिस हुनुहुन्थ्यो यो चलन अन्त पनि भएर नै भन्नु भएको होला । त्यसबखत नेपाली कांग्रेसको बहुमत थियो । अहिले सरकार नेकपाको संसद पनि नेकपाको खल्तिको जस्तो भयो । नेकपामा असल कम्युनिष्ट बन्ने धुन चलेको छ अहिले पनि दुईथरी छौं भन्छन् ।
असल कम्युनिष्टको व्यवस्थामा पार्टीको सरकार मात्र हुँदैन संसद र न्यायालय पनि पार्टीको हुन्छ । यो बाटोमा जाने चाहना त होइन ? प्रश्न उठ्न थालेको छ । नेपालमा जुनसुकै नामको पार्टी भए पनि नेपालको संविधान अनुसार चल्नु पर्छ । नेपालको संविधान अनुसार कम्युनिष्ट पार्टी चल्छ तर कम्युनिष्ट व्यवस्था चल्दैन ।
सुरेन्द्र पाण्डे नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं राष्ट्रियसभामा विपक्षी दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले यो बहस चलिराखेको कुरा देखिरहेको थिए आफैले भागलिन पाइरहेको थिइन यो मौका दिनुभएकोमा आदरणीय नरहरि दाइलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । प्रतिनिधिसभा अबरुद्ध छ, सभामुखको निर्वाचन हुनसकेको छैन ४ महिना भइसक्यो । केही विधेयकहरु राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाले पासगरिसकेर पनि सभामुख नभएकाले प्रमाणीकरण गर्न नपाएर लागु हुन सकेको छैन हामीले पहिला विशेष अधिवेशन बोलाएर सभामुखको निर्वाचन गरौं भनेका थियौं । अहिले हिउदे अधिवेशन बोलाएको पनि १ महिना भयो तर प्रतिनिधिसभा चल्न सकेको छैन । उनीहरुको पार्टी भित्रको झगडा र भागवण्डा नमिलेका कारणले यो भइरहेको छ ।
सभामुखलाई हामीले स्वतन्त्र मान्छे भनेर हामी लिन्छौं । उसले दलबाट जितेपनि सभामुख, उपसभामुख भइसकेपछि आफ्नो दलिय हैसियतबाट ऊ बाहिर रहन्छ । यसको मतलव सदन भित्र उसले तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने नै हो । सत्तापक्षमा पनि सरकार प्रमुखलाई सभामुख पनि मेरै मान्छे हुनुपर्छ भन्ने लागेको देखिदैछ । यो प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता केही देखिएन । चिन्ताको विषय यो हो ।
हामीले ल्याएको पद्धति भित्र बसेर काम गर्न चाहेको देखिएन । हामीले राजा फालेर व्यवस्था परिवर्तन गर्यौँ तर प्रवृत्ति त्याग्न सकिरहेको देखिदैन । सरकारलाई चाहे अनुसार संसदले सहयोग गरेन भन्ने लागिरहेको छ । यो प्रवृत्ति उहाँहरु कम्युनिष्टबाट आउनु भएको अहिले उहाँहरुलाई कम्युनिष्ट सिद्धान्तले डो¥याई राखेको छ । कम्युनिष्ट सिद्धान्तमा संसद देखाउने मात्र हो । निर्वाचन हुन्छ देखाउनका लागि मात्र हुन्छ । त्यही मनोवृत्ति यहाँ देखियो । प्रधानमन्त्रीले संसदमा प्रतिपक्षलाई मात्र होइन कि सत्ता पक्षबाट भएका बहसलाई पनि पचाइरहनु भएको छैन ।
प्रधानमन्त्री संसदलाई आफ्नो पकेटमा राख्न चाहनु हुन्छ । न्यायपालिकालाई पनि आफ्नो पकेटमा राख्न चाहनु हुन्छ । संविधानले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र न्यायपालिका, स्वतन्त्र व्यवस्थापिक र कार्यपालिकाको शक्तिपृथकिकरण देखिइरहेको अवस्था छैन । यही प्रवृत्तिले गर्दा समस्या बढेको छ । यसले व्यवस्थाप्रति मानिसहरुलाई निरास बनाउने खतरा बढेको छ । संसद लाचार छाया जस्तो बनाइएको छ । यो संसदीय व्यवस्था उहाँहरुको व्यवस्था होइन । संसदीय व्यवस्थाको बारेमा हाम्रो भित्र पनि बहस छ तर हाम्रो पार्टीको सैद्धान्तिक आधार भनेको संसदीय व्यवस्था नै हो ।
भीमसेनदास प्रधान नेपाली कांग्रेसका नेता एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य भीमसेनदास प्रधानले यो अवरोध भन्ने शब्द समस्याको मूलजड् भागवण्डा हो । पार्टीहरुमा देखिएको झगडाको मूल कारण नै भागवण्डाको हो । अहिले संसद अबरुद्ध गराईएको छ भागवण्डामा कुरा नमिलेर । हिजो पार्टी एकता हुँदा सरकार प्रमुख नेकपा एमाले त्यसमा प्रधानमन्त्री केपी वली र संसदमा सभामुख कृष्णबहादुर महरा नेकपा माओवादीको भागवण्डा थियो । अहिले संविधानको धारामा १ देखि ६ सम्म हेर्ने हो भने संसद अबरुद्ध हुने अवस्था नै छैन । सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले बैठकको संचालन गर्ने भनेर लेखिएको छ । उपसभामुख हुनुहुन्छ, उपसभामुख एमालेको पर्नुभयो । पार्टी एकीकरण भएपछि सहज किसिमले जानु पर्ने हो । तर भागवण्डाले गर्दा त्यो जान सकेन ।
यतिखेर सभामुखको उम्मेदवारलाई एउटालाई राष्ट्रपतिले बोक्नु भएको छ अर्कोलाई प्रधानमन्त्रीले बोक्नु भएको छ पाउनु पर्ने भाग पुरानो माओवादीको हो । अहिले एमालेले जताबाट आएपनि आफ्नै भागमा आउनुपर्ने रणनीति खेलेको छ । अहिले धेरै विश्वविद्यालयमा उपकुलपति खाली छ । नेकपाको भागवण्डा नमिलेर नियुत्त हुन सकेको छैन । नेपालको यतिखेरको सबै समस्याको कारण भागवण्डा नै देखिएको छ ।
लोकतन्त्रमा भागवण्डा हुनुहुदैन जित्नेले चलाउने हो । विगारे अपजस, सपारे जस लिने पनि उसैले हो । जनताले यसको मूल्याङ्कन चुनावमा गर्छन् त्यसैगरी पार्टीले महाधिवेशनमा गर्छन् यो हो लोकतन्त्र भनेको । संविधानसभामा २०४६ सालदेखि एमाले हामीसँग हिडेको हुनाले सहज रुपमा रुपान्तरण हुदै आएको थियो हामीसँग नजिक थियो । अहिले माओवादी मिसिएपछि लोकतान्त्रिक संस्कार विहिन भएको देखिदै आएको छ । महरा सभामुख हुदाँ जर्वजस्ती, संसदीय अभ्यासको मूल्य, मान्यतालाई विर्सेर हामी ह्वीलमा घेराउ गर्दा पनि मतलव छैन पास पास भन्दै जाने, हामी संसदमा उभिदा पनि कुनै अर्थ रहेन । तोडफोड संस्कार लोकतान्त्रिक होइन हामीले गर्दैैनौं ।
संसदमा हामीहरु बोल्छौं । हाम्रो पहिलो बेञ्चमा बस्ने नेताहरु बोले त्यो राष्ट्रिय समाचार बन्छ, यसमा हाम्रो कमि छ । नेताहरु नबोल्दा बाहिर जनताहरुले प्रतिपक्ष कमजोर भएको भनिरहेका छन् । संसद अझै केही दिन चल्न कठिन जस्तो देखिदैछ । नेकपामा भागवण्डा अझै मिलेको छैन । यो इतिहासमा नै नभएको सत्ता पक्षले संसद अवरोध गरेको नेपालमा भयो ।
वरिष्ठ बुद्धिजीवि डा.इन्द्रा अधिकारीले हामीले व्यवस्थाको कुरा गर्दा व्यवस्था आफै हिड्ने होइन । व्यवस्था चलाउने व्यक्तिहरुले हो । हामीले धेरै पद्धतिहरु फे¥यौं, कुनै पद्धति पनि बाँकी राखेका छैनौं अब निर्वाचन तर्फमात्र हामी जादैछौं । हाम्रोमा राणा, राजा हुँदै पंचायत पनि फाल्यौं तर अमेरिका जस्तो देशमा पनि अहिले समस्या आएको छ । हामी समेत अमेरिकाका कारण प्रताडित हुनुपर्ने अवस्था आउदैछ । यो पद्धति आफै समस्या भन्दा पनि प्रवृत्ति, संस्कार हो भन्ने लाग्छ । हामी अरु लोकतान्त्रिक भइदिओस् भन्ने आफु लोकतान्त्रिक नहुने रहेछौं । लोकतान्त्रि करण गर्ने दिशामा विगतमा कांग्रेसले पनि लगेन । नेकपा कम्युनिष्ट हुन् जस्तो मलाई लाग्दैन । हिजो ज्ञानेन्द्रलाई फाल्यौं, आज सबैले आफुलाई ज्ञानेन्द्र ठानेको देखिन्छ । हामीले राजनीतिक संस्कार, प्रवृत्ति कसरी सुधार गर्न सकिन्छ यो ठूलो कुरा हो ।
हामीले गरेको कामको भोलि के प्रभाव पर्छ भनेर जिम्मेवार व्यक्तिहरुले पनि हेरेको पाइएन । सभामुख, एमसीसी, वल्र्डबैंङ्क लगायतसँग गरिने कामको भोलि कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने कुरा हेरेको देखिदैन । भारत, चीनसँग गरेका संझौताहरु सँग पनि यि कुराहरुमा तात्वीक भिन्नता छैन । तर आज हामी प्रश्न गरिरहेका छौं, हिजो गरेनौं । प्रतिपक्ष पनि जिम्मेवार भएन सत्तामा भएको बलका भरमा काम गर्न खोजेको देखिदैछ । अरुको पनि मूल्य छ भन्ने कुरा राजनीतिमा बुझ्नु पर्छ । हामी जुनसुकै पद्धतिमा गएपनि जिम्मेवार भएनौं भने केही गर्न सकिने हुदैन । त्यसैले कति ठाउँमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीहरु पनि निरङ्कुश बनेका छन् । कार्यकारी कम शक्तिशाली भएमा नै लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । चलाउने संस्कारले हो, संस्कारको विकास गर्नुपर्छ ।
बुद्धिजिवि उद्धव प्याकुरेलले नरहरि दाइले यो विषय उठाउदा अहिलेको अवस्थालाई हेर्न खोज्नु भएको होला । रामचन्द्रजी यो भन्दा अल्लि अघि जानु भयो जस्तो लाग्यो । रामचन्द्रजीले भने जस्तै अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओली कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुनुभएको भए कस्तो हुन्थ्यो होला ? संसद छ तर प्रधानमन्त्री आफ्नै किसिमले चलाउन खोजिरहनु भएको छ । व्यवस्थामा सुधार नगरी अर्को व्यवस्थामा पुग्दा राजनीतिक संस्कार नभएको हाम्रो जस्तो देशमा चल्न सक्दैन । यतिखेर देखिनु भएका नेताहरु प्रत्यक्ष कार्यकारी हुनुभएको भए कस्तो हुन्थ्यो होला ? पार्टी संचालनमा नेतृत्वहरु लोकतान्त्रिक देखिनु भएको छैन । अहिले संसदले प्रधानमन्त्रीलाई नियन्त्रण गरिराखेको छ । आफ्नो कुरा मिल्यो भने प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्ने गर्छौं । प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्दाको अवस्था अहिलेको हो । निर्णय जस्तो आएपनि म प्रक्रियामा जान्छु भन्ने हो भने यो तुरुन्तै समाधान हुन्छ ।
संसद चलाउन प्रतिपक्षको पनि अहं भूमिका हुन्छ । नेपालको संविधानले पनि यो भन्छ । प्रतिपक्षको संसद हो तर प्रतिपक्ष कहाँ छ ? प्रतिपक्षको नेता कहाँ बोल्नु भएको छ ? कहिल्यै सुनिदैन । संसदमा सभापति, महामन्त्री हुनुहुन्छ उहाँहरु संसदमा बोलेको कहिल्यै सुनिदैन । प्रदेशमा पनि त्यहि अवस्था देखियो । आफ्नो एजेण्डा नभएर विपक्षीको पछि लाग्ने भएपछि प्रतिपक्षीको भूमिका कहाँ रहन्छ ? त्यसैले पहिला प्रतिपक्षीले प्रतिपक्षको भूमिका खेल्नु प¥यो । कांग्रेसको सांसद रणनीति विहिन भएको जस्तो पनि देखिएको छ । कांग्रेस विपक्षी हो, विपक्षीले विरोध गर्छ । सत्तामा हुदा अर्को हो, पार्टी रणनीतिक हुनुपर्छ । प्रतिपक्षी संसदमा देखिनु हुनुपर्छ । यतिखेर प्रतिपक्ष नेकपा सत्ता पक्ष कांग्रेस जस्तो भएको छ देखिएका विषयहरुमा । संसद प्रतिपक्षकै हो तर प्रतिपक्ष को हो भनेर खोज्नु पर्ने अवस्था भयो भने संसद सत्ता पक्षकै हुन्छ ।
बुद्धिजिवि हरि प्रसादले प्रजातान्त्रिक पद्धतिको सुरुवात र अन्त्य कसरी हुन्छ भन्ने कुराको चिन्तनमनन् हरहमेशा नागरिकहरुले गर्नुपर्ने विषय हो । संसदमा अहिले भइरहेको अवस्था व्यवस्थाको कारणले होइन यो प्रवृत्ति हो । यसलाई हामीले भित्रदेखि मनन गर्नुपर्छ । हामीले कहिल्यै पनि हाम्रो नीति, व्यवस्था अनुकुलको व्यवहार सत्तामा हुँदापनि गरेका छैनौं, प्रतिपक्षमा हुँदा पनि गरेका छैनौं ।
दलहरुमा नीतिको खालिपन देखिन्छ । प्रजातान्त्रिक सिद्धान्त, समाजवादसँग आवद्ध भएको राष्ट्र र राष्ट्रियतासँग प्रतिबद्ध भएको खालको निर्णय कहिल्यै हुन सकेको छैन । मूलकुरा प्रवृत्ति हो यसको सही किसिमले विकसित हुन नसक्दासम्म यस्ताखाले समस्या हामीले फेस गरिरहनु पर्ने हुन्छ । यो नेकपाको व्यवस्था होइन । उनीहरुले यो गर्छन् भन्ने लागेकै हो । नेकपा आफुले नचाहेको व्यवस्था आफ्नो अनुकुल प्रयोग गर्दा हुने हविगत यही हो ।
हामीले राजसंस्था फाल्यौं ठूलो कुरा गरेका हौं । हामीले फाल्न खोजेको होकी त्यसभित्रको प्रवृत्ति, चरित्र जसले नागरिकहरुलाई हरहमेशा अपमान गर्छ, दमन गर्छ, नागरिकको स्वतन्त्रतालाई बन्दकमा राख्छ, यसलाई फाल्न खोजेको हो वा राख्न खोजेको हो ? अहिले यहि देखिन्छ । यो चेतना परिवर्तन कसरी गर्ने ? राष्ट्र र नागरिकलाई चाहिएको व्यवस्था कस्तो हो ? किन काम गरेन भनेर घोत्लीनु पर्ने, सोच्नु पर्ने र आआफ्नो ठाउँबाट इमान्दारी पूर्वक काम गर्नुपर्ने स्थिति अहिले छ ।
बाग्मती प्रदेशका सांसद जीवन डंगोलले संसद अबरुद्ध हुनुपर्ने प्रतिपक्षका कारणले हो संसदीय व्यवस्थाको अभ्यासमा । यतिखेर हाम्रोमा उल्टो चक्र घुमिराखेको अवस्था छ । अहिले संसद प्रतिपक्षको हुननसक्नु अभ्यास हुननसकेको कारणले नै हो । कांग्रेस प्रतिपक्षको भूमिकामा छ । हिजो लोकतन्त्र पनि अन्य पार्टीलाई कांग्रेसले नै सिकायो । हिजो प्रतिपक्ष भएकोले संसदको गरिमाको भूमिका निभाउन सकेको थिएन । हिजो द्वन्द्वका रुपमा मात्र प्रतिपक्षको भूमिका निभायो । कांग्रेसले अहिले प्रतिपक्षको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ भनेर यो २ वर्षमा सिकाएको छ ।
अहिलेको घटनाले कमजोर मात्र होइन नियत माथि नै प्रश्न उठेको छ । नियत र नियति फरक कुरा हुन् । नियतिले कहिले माथि पुर्याउछ कहिले तल पुर्याउछ । नियत खराव भए धेरै कुरा विग्रन्छ त्यसैले नियत सफा हुनै पर्छ । सत्ता पक्षमा रहदा र प्रतिपक्षमा रहदा पनि नियत सफा हुनैपर्छ । सत्ता पक्ष यसमा थप जिम्मेवार हुनुपर्ने व्यवस्था हो यो ।
एकेन्द्र पन्त दैलेख नेपाली कांग्रेसका नेता एकेन्द्र पन्तले सरकारले संसद अबरुद्ध गर्नु नेपालका लागि नौलो र अनौठो अभ्यास हो । संसदीय पद्धति भएको अन्यत्र ठाउँ दुनीयामा कहि यस्तो भएको छैन । यसलाई खोतल्दै जाने हो भने कांग्रेस पार्टीले लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई कति आत्मसाथ ग¥यौं त्यो पनि समिक्षाको विषय हो । तर कम्युनिष्टले जे गरेका छन् त्यो कांग्रेसले गरेको छैन । कांग्रेसले लोकतन्त्र मिच्दा कम्युनिष्टको हातमा गयो त्यसैकारणले आज हामी यो भोग्दैछौं ।
राष्ट्रिय मिडियाहरुले सभामुखको विषयलाई लिएर चर्चा गरेका छन् । मलाई लाग्छ के सभामुखको अवरोध पछि पनि यो अवरोध खुल्छ ? मलाई लाग्छ त्यो अवरोध अझै कायम रहन्छ । नेकपाले इच्छाईएको व्यक्तिको कारण यो अवरोध भएको छ भोलि उनीहरुलाई निहु एमसीसीका कारणले गर्छन् । यसमा कांग्रेसको भूमिका के हुन्छ ? नेतागणहरुले गम्भीर भएर सोच्ने विषय हो । यस विषयमा इमान्दार भएर नलाग्दासम्म यस्ता अवरोधहरु खुल्ने र पार्टी सुध्रिने अवस्था देखिदैन ।
रामचन्द्र घिमिरे नेपाली कांग्रेस काठमाडौंका सदस्य रामचन्द्र घिमिरेले सरकारका कारणले अवरोधमा परेको संसद् यो परिस्थिति डरलाग्दै किसिमले देखिन लाग्यो । संविधानसभाबाट संविधान बनाइसकेपछि नागरिकहरुमा एककिसिमको उत्साह देखिएको थियो । त्यो उत्साहलाई सरकारको संचालनले, प्रतिपक्षको भूमिकाले कमजोर बनाउदै आएको थियो । यतिखेर संसद् नै अबरुद्ध भइसकेपछि शक्ति पृथकिकरण पनि नमिलेको जस्तो देखियो । पहिला सरकार, संसद् र न्यायालयमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त लागु हुन्थ्यो होला अब त्यो देखिएन ।
अब यसको विकल्पका बारेमा पनि चर्चा हुनुपर्छ । संविधानसभामा प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन नरहरि आचार्य र प्रदिप गरिले टेवल नै गर्नु भएको थियो । यो विषय संविधानसभामा बहस पनि भएको थियो । यतिखेर नेकपाको सरकार पनि उसकै, संसद पनि उसकै, प्रदेश सरकार पनि उसैको हुदाँ नियन्त्रण र सन्तुलनको अवस्था रहेन ।
हिजो राजा हुँदा यो संसदीय व्यवस्था त्यसका लागि ठिक थियो होला ? यतिखेर संसदीय व्यवस्थाको सन्तुलनका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जानु प¥यो । त्यसले मात्रै नियन्त्रण गर्न सक्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास गरेर जानको लागि प्रत्यक्ष कार्यकारी र संसदको बेग्लै भूमिका हुनै संवैधानिक व्यवस्था हुनुपर्ने मागेको जस्तो देखिदैछ ।
अहिले उनीहरुले कम्युनिष्ट व्यवस्था ल्याउन लागे भन्ने कुरालाई हिजो उनीहरुको दुईतिहाई हुदा पनि संविधान संशोधनमा गएनन् । तर यसलाई चल्न नदिने भए, यो चल्दैन । प्रधानमन्त्रीले चाहनु भएन भने यो संसद् चल्दै नचलि बन्द भएर सकिन्छ । अर्को अधिवेशन पनि बजेट पास गर्नसम्म चलाउने त्यसपछि संसद नै नचल्ने अवस्था तर्फ जान खोजेको देखिदै छ ।
संसद नचले के हुन्छ ? यसलाई कसरी चलाउन सकिन्छ ? यतिखेर बहस हुन जरुरी छ । यतिखेर डराउनु पर्ने अवस्था छ । हामी लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता, मूल्यपद्धतिका कुरा गरिराखेका छौं यो रहने ठाउँ नै रहेन । त्यसैले प्रत्यक्ष कार्यकारी यसको उत्तम विकल्प हुन सक्छ ।
प्रदेश तहमा पनि नेकपाको केन्द्रीय सचिवालयले निर्णय गरेर प्रदेशको नाम र राजधानी तोकिदैछ । यही हो हामीले खोजेको संघीय लोकतान्त्रिक गणराज्य ? यही हो संविधानले परिकल्पना गरेको विषयहरु ? त्यसैले प्रत्यक्ष कार्यकारीको निर्वाचन गरेर, संसद्को भूमिका बेग्लै किसिमले परिभाषित नगरे अब पार्टी नियन्त्रित भएर आउने भयो । यतिखेर नेकपाले जनमत पाएको छ । देशको संविधान पनि नेकपाको निर्णय अनुसार चल्ने भयो । त्यसैले संघीय लोकतान्त्रिक गणराज्य संचालनकालागि प्रत्यक्ष कार्यकारीको निर्वाचन आवश्यक भयो ।
कार्यक्रममा प्रह्लाद पन्त, उत्तम शर्मा, विजयराज ओझा (डोटी), भक्तदास श्रेष्ठ, टोपेन्द्र रानामगर, संजय थापा, विनोद सिं रावल, अर्जुन देवकोटा, श्याममणी आचार्य, अनिष श्रेष्ठ, प्रेम खत्री, लगायतले आफ्नो विचार राख्नु भएको थियो ।
२१ चैत्र २०७६, शुक्रबार ०६:४२
कोरोनाभाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या ५३ हजार नाघ्यो
२१ चैत्र २०७६, शुक्रबार ०१:११